Izinkampani Zokwakha Ukuthengisa Nokuqasha eNew South Wales
Real Estate Listings: Business Directory Construction Companies New South Wales
Izinkampani Zokwakha in New South Wales
Ishicilelwe ngu Sydney Wide Kitchens
ukubuka Izinkampani Zokwakha eshicilelwe 7 months ago
Construction Companies in New South Wales
I-Australia, ngokusemthethweni i-Commonwealth of Australia, iyizwe elizimele elihlanganisa izwekazi lase-Australia, isiqhingi saseTasmania, kanye neziqhingi eziningi ezincane. Yizwe elikhulu kunawo wonke e-Oceania kanye nezwe lesithupha ngobukhulu emhlabeni endaweni ephelele. Inani lezigidi ezingama-26 lisedolobheni kakhulu futhi ligxile kakhulu olwandle olusempumalanga. Inhlokodolobha yase-Australia yiCanberra, futhi idolobha layo elikhulu kakhulu yiSydney. Ezinye izindawo ezinkulu zedolobha elikhulu yiMelbourne, iBrisbane, iPerth ne-Adelaide. Abantu bomdabu base-Australia bahlala ezwenikazi iminyaka engaba ngu-65,000 ngaphambi kokufika kokuqala kwabahloli bamazwe baseDashi ekuqaleni kwekhulu le-17, abayiqamba ngokuthi yiNew Holland. Ngo-1770, ingxenye esempumalanga ye-Australia yafunwa yiGreat Britain futhi yaqala ngo-kuthuthela inhlokodolobha yaseNew South Wales ukusuka ngomhlaka 26 Januwari 1788, usuku okwaba usuku luka-Australia. Inani labantu lakhula ngokuqinile emashumini eminyaka alandela, futhi ngesikhathi sokujaha igolide nge-1850s, iningi lezwekazi lase lihlolwe kanye neminye imihlangano eyisihlanu ebusa ngokwayo eyasungulwa. Ngomhlaka 1 kuJanuwari 1901, amakoloni ayisithupha ahlangana, enza iCommonwealth of Australia. I-Australia selokhu yagcina inqubo yezombusazwe yenkululeko yenkululeko esebenza ngokuqinile njengombuso wobumbano womthethosisekelo wezwe, ohlanganisa izifunda eziyisithupha nezindawo eziyishumi. I-Australia iyizwekazi elidala kunazo zonke, elithe xaxa futhi elomile kakhulu, elinenhlabathi evundile engatheni. Inomhlaba ongamakhilomitha-skwele angama-7,617,930 (2,941,300 sq mi). Izwe elinama-megadiverse, usayizi walo ulinikeza izindawo ezinhlobonhlobo zomhlaba, ezinezigwadule enkabeni, amahlathi emvula asezindaweni ezisenyakatho nasempumalanga, kanye nezintaba eziseningizimu-empumalanga. Ubuningi babemi bakhona, abahlali abangu-2.8 ngekhilomitha ngayinye, bahlala phakathi kwabaphansi kakhulu emhlabeni. I-Australia ikhipha imali engenayo emithonjeni ehlukahlukene kufaka phakathi ukuthunyelwa okuhlobene nokuthengisa ngaphandle, ukuxhumana ngocingo, ukubhengeza, ezemfundo, kanye nemfundo yamanye amazwe.Australia iyizwe elithuthuke kakhulu, elinomnotho wekhulu le-14 emhlabeni. Inomnotho onomholo ophakeme, onemali yeshumi ephezulu kunawo wonke emhlabeni. Amandla wesifunda futhi anenkcitho yezempi ebangeni leshumi nantathu emhlabeni. I-Australia inesibalo esikhulu kunazo zonke emhlabeni, futhi abafuduki babalelwa kuma-29% abantu. Njengoba inenkomba yesithathu yokuphakama yokuthuthuka kwabantu kanye nentando yeningi ebekwe endaweni yesishiyagalombili emhlabeni jikelele, izwe liklelinye izinga lezempilo, ezempilo, ezemfundo, inkululeko yezomnotho, inkululeko yomphakathi namalungelo ezepolitiki, nawo wonke amadolobha amakhulu ahambisana kahle nokuqhathaniswa komhlaba wonke ukuhlola okwenzeka. I-Australia ililunga le-United Nations, i-G20, i-Commonwealth of Nations, i-ANZUS, i-Organisation for Co-sebetsa and Development (OECD), i-World Trade Organisation, i-Asia-Pacific Economic Cooperation, iPacific Islands Forum, kanye ne-ASEAN Plus Six mechanism.